Teen Titans Go! To the Movies (2018) – Myanmar Subtitles
Genre: Action, Animation, Comedy Director: Aaron Horvath, Peter Rida Michail Actors: Greg Cipes, Khary Payton, Scott Menville, Tara Strong Country: USA Released: 27 Jul 2018 Score: 6.8 Duration: 84 min Quality: 1080p Years: 2018 View: 6,551
စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေခေတ်စားလာတဲ့ ဒီဖက်ခေတ်မှာ Robin တစ်ယောက်လည်း သူ့ကားလေးတစ်ကားလောက်လိုချင်လာပါတော့တယ်။ ဆိုးတာက Sidekick တွေအကြောင်း ဘယ်သူမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်မနေပါဘူး။ Robin တစ်ယောက် သူဟာ Superhero အစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားရင်းက Titan တွေကို ကျောခိုင်းမိသွားတဲ့အခါ…..
DC ကတော့နောက်ပြီလို့ ပြောရမလားပဲ။ ဒီ animation ထဲမှာ တောက်လျောက်ဖောက်ထားတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ Animation တွေ Hollywood star တွေ movie တွေကိုလိုက်အရွန်းဖောက်ထားတယ်။ WB shield opening scene တွေကိုသတိထားကြည့်ရင် ထူးခြားနေတာတွေကိုသတိပြုမိမှာပါ။ နောက်ခံ background တွေကိုသတိထားကြည့်ရင်လည်း ester egg တွေ တပုံတပင်ကြီးပါနေတာတွေ့ရမယ်။ DC ရဲ့ batman and robin, Superman (1978),BVS,Justice League, Green lantern တို့အပြင် Back to the future, lion king, GOTG vol.1 စတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကို လျောက်ဖောက်ထားတယ်။ ဘယ်နေရာက ဘာကိုဖောက်ထားတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော် sub ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြန်ကြည့်ရင်းမှ သတိထားမိတာတွေကိုတော့ မထည့်လိုက်ရဘူးပေါ့။
Crd scene လေးလည်း စောင့်ကြည့်ကြပါ DC fan တွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပါပါတယ်။
Nicolas Cage က Superman နေရာက အသံသရုပ်​ဆောင်​ထားပါတယ်​ သူ superman ကိုတော်​တော်​ရူးသွပ်​တာကိုတော့ သိကြမှာပါ။ ပြီးတော့ စူပါဟီးရိုးဖန်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကြီးတစ်ယောက်လည်း ပါ ပါသေးတယ်။
ဘာသာပြန်နှင့် အညွှန်းကတော့ Card Zero ဖြစ်ပါတယ်
(820 MB) Download Soliddrive.co Myanmar 360p
(400 MB) Download
#Teen Titans Go! To the Movies (2018) #Download Teen Titans Go! To the Movies (2018) Full Movie #Free Teen Titans Go! To the Movies (2018) Download
Naked Weapon (2002) DVDRip 18+
River’s Edge (2018) 18+
Marvel’s Inhumans (2017) Season 1 Complete
Supernatural (Season 13) Complete